အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုမော်ကွန်းတိုက်7၏စာမျက်နှာ 24 NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး (စာမျက်နှာ 7)
ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရပါစို့ - မလုံလောက်သောသိုလှောင်မှုအဓိကစွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှကိုထပ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖန်တီးခံရဖို့ဆက်လက်သကဲ့သို့, ထာဝရမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: "အခုတော့ကျနော်တို့ကရှိသည်, ငါတို့ကဘယ်နေရာမှာစောင့်ရှောက်သလဲ?" ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသိုလှောင်မှုအတွက်အထူးပြုပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်အမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာ, မတူဘဲ။ ယနေ့ ...
JMR သည် Mac Mini RAID Desktop နှင့် Rackmount Work Stations များ၏ General Availability ကိုကြေငြာခဲ့သည်
နယူး Thunderbolt သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း desktop နဲ့ rackmount တိုးမြှင့်သက်တမ်းကထပ်ပြောသည်, Mac Mini ကိုမှ RAID စွမ်းရည်တိုးချဲ့ရေးနှင့် IO ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် - ကပစလှည်းနဲ့စတူဒီယိုများအတွက်စံပြ JMR အီလက်ထရောနစ်, Inc ၏အရွယ်မှာသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး workflows, ယခုအပတ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် ThunderboltTM ၏အထွေထွေရရှိနိုင်ကြေညာခဲ့သည် Apple ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာmini®များအတွက် desktop နဲ့ rackmount ကို Workstation သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း။ အဆိုပါဆန်းသစ်တဦးတည်း-of-a-မျိုးစက်သက်သေပြပါလိမ့်မယ် ...
NooBaa, Inc, အစ္စရေးအခြေစိုက် '' frictionless '' သိုလှောင်မှုဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ, မကြာသေးမီက VMworld 2016 မှာ၎င်း၏တရားဝင်ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ သိုလှောင်မှုပမာဏအားဖြင့် 2013 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်စစ်ပြန် Yuval Dimnik (CEO ဖြစ်သူ) နှင့် Guy Margalit (CTO) networking, ကုမ္ပဏီလက်ရှိအချိန်တွင်အစ္စရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဂျေရုဆလင် Venture အပေါင်းအဖေါ်များ (www.JVPvc.com) နှင့် Ourcrowd (www.ourcrowd.com) မှတဆင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့အမျိုးအနွယ်ကိုသည် ဖြစ်. , ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းစီးရီးတစ်ဦးကရန်ပုံငွေရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။ NooBaa ဆိုပါတယ် ...
TransferSoft Windows အတွက် HyperTransfer ၏အထွေထွေရရှိနိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
native Windows ဗားရှင်းယနေ့ Windows အတွက်HyperTransfer®၏အထွေထွေရရှိနိုင်ကြေညာခဲ့သည်, မည်သည့်ဒေသခံကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဧရိယာကွန်ယက်ကိုTransferSoft® Inc ကို, OEMs နှင့်စနစ်များသမာဓိအရှိဆုံးအကျိုးရှိစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေတာ transfer software ကိုတစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူအပေါ်အပြည့်အဝလိုင်းအမြန်နှုန်းကိုမှကွန်ယက်ကိုလွှဲပြောင်း accelerates ။ အဆိုပါဇာတိကို Windows စုစည်း software ကို suite ကိုဖြတ်ပြီးအပြည့်အဝလိုင်းအမြန်နှုန်းကိုမှပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနှင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်း accelerates ...
ရိုးရှင်းစွာအ SMPTE - မင်္ဂလာ 100 နှစ်များ!
မီဒီယာကုန်သွယ်ရေး၌သငျ၏သူတို့အားမပေးဘို့, SMPTE post-ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်း, ငါဂုဏ်ယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုအရာ၏ "Motion Picture & ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က" ကိုဆိုလိုတာပါ။4Times Square - - ထိုသူတို့ Nasdaq MarketSite မှာအဆိုပါပိတ်ပွဲဘဲလ်မြည်, ဘာဘရာအိပ်ချ် Lang, SMPTE အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာရှိခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ Centennial နှစ်မြောက်ကျင်းပ 43rd & ဘရော့ဒ်ဝေး ...
Microsoft နှင့် Facebook ကို 160Tbps အရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင် Cable ကို Lay မှ
ဒေသအလိုက်နှင့်ပြည်ပမှာ, တိမ်တိုက်နှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်းမြင့်များအတွက်ကြီးထွားလာဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးပမ်းမှာတော့ Microsoft နှင့် Facebook ကိုပူးတွဲ "MAREA" ၏တင်သောနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုဃ်းတိမ်သည်အခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ခြေလှမ်းထုတ်ပြန်ကြေညာ - သစ်တစ်ခု, မှုတွင် Of-The အတ္တလန္တိတ်ကိုဖြတ်ပြီးအနုပညာ subsea cable ကို။ "ဒီရေ", ဘေလ်ဘောင်မှ, ဗာဂျီးနီးယားကနေအမေရိကန်ဆန့်ကြလိမ့်မည် MAREA, စပိနျ ...
broadcast အာရှ 2016 ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ငါ (သင်သိ 16 နာရီအချိန်ကွာခြားချက်) left မတိုင်မီဒါနဲ့ရက်အနည်းငယ်အဆိုပါ 2016 အသံလွှင့်အာရှ Show ကိုမှီ, နေ့, စာသား, စင်္ကာပူမှရလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဥယျာဉ်မြို့တော်သတ္တိခရီးသွားပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိပြီးငါဂျက်သုံးနေပြီဖို့ညှိနှင့်စိမ်-in ကိုဒေသခံမြင်ကွင်းများအချို့ကိုဖေါ်ပြခြင်း-up, တောက်ပမတိုင်မီတချို့အချိန်ကိုခွင့်ပြုချင်ခဲ့တယ် ...
RR မီဒီယာနှင့် SES ပလက်ဖောင်းန်ဆောင်မှုများပေါင်းမည်မှ
အွန်လိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ခံရဖို့နယူးကုမ္ပဏီ, အင်တာနက်ကနေတဆင့် On-demand မီဒီယာမှအဆိုပါလွှမ်းမိုးသော access ကိုဆန်းသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာန်ဆောင်မှုများ၏လောကဓာတ်-ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ, ဂြိုလ်တု, IPTV, cable များနှင့်လက်ကိုင်ကိရိယာ desktops တွေနဲ့, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနေရာများမှမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများ, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား, အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆို, အစဉ်အမြဲအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ, အားကစားလိခ်နှင့်ညာဘက်များအတွက်အချိန်-စျေးကွက်-ရန်နှင့်ငွေရှာခြင်းအတွက်မော်ဒယ်ပြောင်းလဲသွားပြီ ...
7 ၏စာမျက်နှာ 24«ပထမဦးစွာ...«56789 » 1020...နောက်ဆုံး»